I-LEGO Boost: Yonke into onokuyenza-Ikkaro
yokuqalisa >> Amathoyizi >> Ukunyusa iLego
I iqela kweli candelo onke amanqaku kwi I-LEGO Boost Robotics Kit. Ukusuka kwinkcazo yento eyiyo kunye nendlela enokusetyenziswa ngayo ukuze ubone ukuba unomdla kwiindibano zayo ezahlukeneyo.
Ndiphinda ndiphonononge ezona ngxaki ziphambili esizifumanayo xa usebenzisa i-LEGO yesicelo, yenye yeengxaki zengxaki kunye nobunye ubunzima obudla ngokuvela.
Okokugqibela, sikufundisa indlela yokufumana okuninzi kwi-LEGO Boost yakho, ukubona iindibano ezintsha, ukudityaniswa kunye ne-Hardware eninzi kunye nenkqubo usebenzisa iilwimi ezahlukeneyo, njengePython.
Isisishwankathelo sayo yonke into endiyifundayo malunga ne-LEGO Boost kunye nazo zonke iimvavanyo kunye nohlengahlengiso endiluzamayo.